FBC - Fiigichi guyya guyyaa carraa sa’aatii 7 dabalataa jiraachuu ni-uuma: qorattoota
Fiigichi guyya guyyaa carraa sa’aatii 7 dabalataa jiraachuu ni-uuma: qorattoota
Finfinnee, Ebila 09, 2009 (FBC) Qorattoonni guyya guyyaatti sa’aatii tokkoof fiigichi fiigamu carraa lubbuun jiraachuu sa’aatii 7 dabalataa akka uumu ibsaniiru.
Yunivarsitiin Bulchiinsa Ayihowaa fiigichi guyya guyyaan sa’aatii tokkoof fiigamu carraa lubbuun jiraachuu sa’aatiiwwan 7 dabalataa akka dabalu qorannoon bira ga’eera jechaa jira.
Qorannoon Yuunivarsitichaa Joornaalii Kolleejii Kaardiyoolojii Ameerikaa irratti ba’e guyya guyyaan daqiiqaa 5 hanga 10 fiiguun du’a sababa dhibee onnee fi ujummoo dhiigaan dhufuu danda’u nihir’isa jedha.
Qorannuchi ragaa sochii ga’umsa qaamaa inistitiyuutii Kuuppar Daalaasiin dhihaate ibseera.
Qorannuchi Piroofeesarri Sochii qaamaa Deek Chuul Li hoggananii kan geggeeffame yoo ta’u, fiigichi guyyaa guyyaan fiigamus carraa dursee du’uu nama tokkoo dhibbantaa 40 ni-hir’isa argannoo jedhu ifoomseera.
Torban keessatti sa’aatii lamaaf shaakala fiigichaa qabaachuun umurii keenya dhibbantaa 3.2 akka dheeressu eereera.
Yaada waliigalaa kanaan saffisa fiigichaa fi fageenya osoo hin-murteessin guyya guyyaan fiiguun carraa du’uu akka hir’isudha qorannuchi kan eere.
Haata’u malee, qorannoon ara Faranjootaa 2014tti geggeeffame guyyaa guyyaan maloota figichaa hordofuun daangaa fageenyaa malee kan fiigan fageenya dheeraa kanneen fiigan irraa caalaa carraa lubbuun jiraachuun isaanii akka dabalu eereera.
Oduuwwan Biroo « Daa’imman bilbiloota ismaartiin taphataa yeroo dabarsan addaan ciccituu hirribaaf akka saaxilaman qorattoonni ibsan	Caba lafee »